Global Voices teny Malagasy » Madagasikara : Adihevitr’ireo mpiblaogy mikasika ny “fanalan-jaza” sy ny fiadiana hoan’ireo zon’ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Febroary 2008 23:27 GMT 1	 · Mpanoratra Mialy Andriamananjara Nandika Tomavana
Sokajy: Madagasikara, Fiteny, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Mandritra ny fety “Saint Valentin,” ilay hetsika manodidina ny fandikana amin'ny teny Malagasy ilay soratra naha-tafintohina ny sasany anefa ankafizin'ny hafa mitondra ny lohateny hoe : The Vagina Monologues  | Les Monologues du vagin  [izay nezahin'i Jogany  nadika ho “Firesakin’ny kitsom-pahafinaretana”] sy ny fitakian'ny Komity mpiaro ny zon'olombelona ny hanavaozan'i Madagasikara ny lalàna manameloka ny fanalan-jaza, dia adihevitra nahamay izay mikasika ny vavy sy ny lahy ao anivon'ny Blaogasyfera.
“The Vagina Monologues | Les Monologues du vagin” amin'ny teny Malagasy
Andiam-behivavy mpibalogy vitsy, dia ireo namana isany Sipakv , Trinitty , Sipagasy , Ikalakely , Jogany  no nihevitra ny hamakiana ny “Firesakin’ny kitsom-pahafinaretana” amin'ny teny Malagasy, ho fandraisana anjara amin'ny fankalazana ny Andro-V , izay “hetsika iraisan'ny maro an'isa ho fampiatoana ireo herisetra atao ny vehivavy na ny lehibe na ny kely.”
Ity fanambarana ity dia nahazoana akony maro tanivon'ny Blaogasyfera.
Ireo lehilahy nanoina dia somary kely finoana ihany. “Tandrify ve izany ?” hoy i Rajiosy  nanontany [Fr] somary mamazivazy kosa i The Non Required  no manontany tena raha tsy ireo lehilahy no tena “iva saranga” [any Madagasikara] :
“Misy hetsika izay nipoitra eto amin'ny Aterineto mba hanova ny toetoe-piainan'ny vehivavy any Madagasikara [Schgeumland no mba fiantson'i TNR azy]. Tsy dia fantatro izay heverina momba izany. Raha ny marina dia tsy “ratsy tandrify” ny fiheverako ny vehivavy any Madagasikara. Tsy mahalala izay fijaliana akory [aza] ny vehivavy any Madagasikara. Satria fiaraha-monina anjakan'ny vavy any. Porofon'izany ny niakaran'ireo vehivavy telo nifandinby teo amin'ny fitondrana tamin'ny taon-jato faha-XIX. [Saika] nila ny fiantsoan'ny lehilahy Malagasy ireo mpanjanatany Frantsay mihitsy vao nifarana izany ! Raha ny tena izy, raha misy olona ambanimbaniana any Madagasikara, dia ny lehilahy izany.”
Mazava ho azy fa na dia nampitondraina ny anarana hoe mpanjaka azy izy telo vavy ireo dia ny Praiministra izay lehilahy ihany no tena tompon'ny fitondrana.
Tsy latsaky ny 23 ireo hafatra nanoina izany lahatsoratra navoaky The Non Required  izany. Ny sasany amin'ireo mpamaky dia nihevitra azy ho “lahy mpanitsakitsaka.” Ny hafa kosa dia nanamarika fa amin'ny ankapobeany dia iva kokoa noho ny saranga misy ny lehilahy no itoeran'ny vehivavy, anefa dia mba misy ihany tombotsoan'ireo vehivavy tsindraindray raha mihoatra amin'ireo lehilahy.
“Iza no aiditra am-ponja raha tra-tehaka manitsakitsaka tokatrano : mbola ny vehivavy Malagasy ihany.”
“Moa ve afaka mandao moramora izay vadiny lehilahy maditra sy mpanitsakitsaka tokatrano ny vehivavy Malagasy : tsia … anefa dia zoe-javatra misy any Madagasikara izany. Indray andro izay aza aho nahita gazety izay sahy nametraka ny matoan-dahatsoratra hoe “Tsy maintsy mamitaka ve ny lehilahy”. Rehefa havaozina ny lalàna mifehy ny fisaraham-panambadiana any Madagasikara dia amin'izay angamba vao hisy hajany kokoa sy afaka hitaky izay hasiny ho azy ireo vehivavy vady andefi-mandry Malagasy.”
“Na dia izany aza, dia marihiko eto [ho isan'ny tombony hoan'ireo vehivavy] fa aorian'ny fisarahana ara-panambadiana dia tsy mba mahazo izay alàlana ny hitaiza ny ankizy ny lehilahy Malagasy.”
(Rehefa mihazo ny faha-7 taonany ilay zaza dia heverina fa tompon-tsafidy izy ka dia omen'ny mpitsara alalàna ny hifidy ny hanaraka an-drainy na an-dreniny.)
Teny manao akory ary
Izay lohateny hampitondraina ny “Firesakin’ny kitsom-pahafinaretana” koa dia nitarika adihevitra amin'izay tokony ho dikantenin'ny “vagina | vagin” amin'ny teny Malagasy. Maro amin'ireo teny fampiasan'ny Malagasy ho fiantsoana ireo fitaovam-pananahana no vesarin'ny hevitra “maloto” [na tsy mihaja] ary izany dia avoitran'ireo hafatra napetrak'ireo mpiblaogy lehilahy Malagasy.
The Non Required ohatra dia manazava fa ny “vagina | vagin” dia azo adika hoe “fory” izay fiteny heverina ho mamoa-fady amin'ny Malagasy.
Ny hafatra napetrak'i SipaKV  ho valiny anefa, dia milaza fa azo adika amin'ny fomba maro “fiteny mahafatifaty kely, mahalaza ny toetoetrany, sy miharo poezia, izay enti-mampiasa azy, sady manaitaitra” [Fr].
Tokony ho ara-dalàna ve ny fahalan-jaza any Madagasikara ?
Mialysenfout  no namoaka izay hevitra tena lalina sy niadian-kevitra mikasika izay fanalan-jaza.
Raran'ny lalàna ny fanalan-jaza any Madagasikara, anefa tamin'ny volana Desambra 2007, dia notakian'ny Komity mpiaro ny zon'olombelona ny hanavaozan'i Madagasikara ny lalàna anamelohany ny fanalan-jaza sy ny hiheverany tsy haha-heloka be vava izany intsony.
“Aty an-toerana, raha ny fiarovan-tena tsy ho bevohoka dia tena mbola tsy maharaka ny “ty ny nday.” Ary tena olana tokoa io amin'ny fiaraha-monina malalaka ara-piraisana ara-nofo (tsy tsikera io fa zavatra hita), izay miha-tanora hatrany ireo firaisana ara-nofo voalohany, tena kiveravera [tsy tandrify] raha izay fampitandremana [ireo tanora] ary dia miha-mitombo hatrany koa ireo tovovavy manala-zaza. Ary satria raràna ny fanalan-jaza, dia antsokosoko ny ankamaroan'izy ireny sady amin'ny fomba tsy manara-penitra ara-pahadiovana sy ara-pahasalamana no tsy olona raitra no manatanteraka izany. Azontsika ialana ireo vehivavy 30'000 maty isan-taona nohon'ny fanalan-jaza ireo, raha avelan'ny lalàna hotanterahina any amin'ny toeram-pitsaboana [ara-dalàna] sy dokotera [raitra] ary ao anatin'ny fe-potoana izay fehezin'ny lalàna [tsara] izany fanalan-jaza izany.”
“Na isika manapak'hevitra ny hihetsika ka manao ny safidy fa izay zaza teraka dia vokatry ny safidy malalaka fa tsy nisy fanereterena. Izany hoe tsy ho terena ny hivesatra izay vokatry ny fahamenarany intsony ireo vehivavy nisedra fanolanana avy ivelany na avy tamin'izay lehilahy havany akaiky. Hanova ny lalàna mba ahafahan'ireo vehivavy izay tandidomin-doza ara-pahasalamana nohon'ny fitondran'aizana mba afaka hanatanteraka fanalan-jaza “hiarovana” ny ain'izy reny.”
Malalaka ireo sehatr'ireo valiteny tamin'ireo hafatra 40 mahery izay nanoina izany lahatsoratra izany, ny sasany mihevitra fa fitiavantena sy fahotana izany, ny hafa kosa dia mihevitra izay vokadratsin'ireo fanao antsokosoko:
“Heveriko ho toy ny fandosirana andraikitra ny fanalan-jaza. Izay tsy manantsiny no ampandoavina, izay tsy nitaky n'inoninona na afaka milaza izay mba sitrapony akory.” (Rayon de soleil)
“Raràn'ny lalàna ny fanalan-jaza any Madagasikara, na dia manohintohina ny fahasalaman'ny reniny aza, na dia vokatry ny fanolanana aza, na vokatry ny fiarahany tamin'ny lehilahy havany akaiky koa. Figadrana 5 taona sy Lamandy 360,000 Ar ka hatramin'ny 10,800,000 Ar no miandry izay tratra”
En cas de viol, NON à la dépénalisation. La mère devra mettre au monde l'enfant non désiré. (dotMG )
“Raha vokatry ny fanolanana ilay vohoka dia LAVIKO ny anomezan'ny lalàna alàlana [analàna azy]. Tokony hoentin-dreniny hatramin'ny fahaterahany ilay zaza tsy niriana.”
En ce qui concerne le fond du débat, je suis pour déployer des gros moyens de mise à disposition et informations sur les méthodes de contraception. (Vola )
“Raha izay mikasika ny fototry ny adihevitra dia isan'ireo izay mihevitra aho ny tokony hanomezan-danja ny tolotra sy fampahafantarana hoan'ny rehetra izay fomba fiarovan-tena tsy ho bevohoka.”
madagascar.mabulle.com  no mitantara izay fomba fanalan-jaza antsokosoko arak'izay fisehony any Antananarivo no sady manolotra tahan'isa mampihoro-koditra :
Pendant ce temps là, à Antananarivo, 50% des décès liés à la grossesse seraient dus à une IVG clandestine qui a mal tourné.
“Mandritra izany fotoana izany, ny 50% -n'ireo fahafatesana mifandrohirohy amin'ny fitondrana aizana any Antananarivo dia vokadratsin'ny ny fanalan-jaza antsokosoko avokoa.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/02/15/625/
 The Vagina Monologues: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Vagina_Monologues
 Les Monologues du vagin: http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Monologues_du_vagin
 The Non Required: http://thenonrequired.wordpress.com/2008/02/05/condition-des-femmes-a-schgeumland/